Madam Tussauds Museum Na-ekpughe Steve Wozniak Wax Ọgụgụ | Esi m mac
Ihe ngosi nka Madame Tussauds a ma ama ugbu a, gosipụtara ọnụ ọgụgụ wax nke Steve Wozniak n'oge ụtụtụ dabara na ememme mmeghe nke Silicon Valley Comic Con 2016 gosipụtara ọnụ ọgụgụ wakporo ya bụ Steve Wozniak n'ụtụtụ Satọdee na mmemme mmeghe nke Silicon Valley Comic Con. , nke e gosiputara n'ime ihe ngosi niile na ngwụsị izu iji kwaga maa San Francisco n'ihi na gị na-adịgide adịgide ngosi.
Madam Tussauds njikwa Chris Cooper kwuru na ụlọ ọrụ rụrụ site ịtụ vootu onye ga - abụ onye kachasị nkà na ụzụ na-emepụta ihe ọhụrụ nke a ga-ahọrọ ịmegharị ya na ụdị wax. Wozniak meriri ntuli aka na ihe karịrị 60 pasent nke votu ahụ, na-eti ndị ọzọ ama ama dịka Tesla CEO Elon Musk.
Ihe kachasị achọ ịmata, dịka ị pụrụ ịhụ n'ihe onyonyo a, mgbe ekpughere uhie uhie iji gosipụta ọnụ ọgụgụ ahụ, ezigbo Wozniak (n'aka ekpe nke foto ahụ), ka nọ na-e imomi mmeputakwa ya, ebe ọ bụ na e gosipụtara ya mgbe niile nwa okorobịa nwere ezigbo ọchị na ezigbo mmadụ. Mgbe ihe ngosi a gasịrị, onye nchoputa Apple kwuru banyere otu o juru ya anya ya na usoro okike nke onu ogugu:
Ọ bụ ihe ịtụnanya ịhụ etu ha si emezu obere nkọwa niile n'oge usoro elekere ise […] Ọnọdụ sitere n'akụkụ niile na ọrụ mmadụ na-arụ n'azụ ya na-eme maka ọdịdị dị adị. Amaghị m na ha kwesịrị itinye aka, echere m na ha ga-ese foto ma jiri kọmputa ma ọ bụ ihe yiri ya bipụta ya.
Wozniak ọ sịkwara na ọ bụ nsọpụrụ inwe onye nwere ọgụgụ isi, dịka ọ na-achọ mgbe niile, na-ekwupụta superhero wax ọgụgụ na ọ hụrụ na ụlọ ngosi ihe mgbe ochie mgbe ọ bụ nwata.
Enwere m mmasị na teknụzụ, ọ na-eme m ka ọ bụrụ na m bụ nnukwu dike n'ụzọ ụfọdụ, enwere m ike karịa ka m ga-enweghị ya. Ọ bụ usoro echiche, na-ekwere ihe ndị na-adịghị adị na ụwa n'ezie, mana na ụwa gị, na isi gị. Nke ahụ bụ mgbe anyị nwere ikike ịghọta ha ma mee ka ha mezuo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Madam Tussauds museum kpughere Steve Wozniak wax ọgụgụ
Budata akwụkwọ ahụaja nke isiokwu nke Machị 21 a 'Ka anyị gbaa gị aka' maka iPhone, iPad na Mac